YDS 2006 German Exam Mibvunzo neMhinduro
YDS 2006 Bvunzo dzeGerman Mibvunzo neMhinduro. Kune YDS 2006 yeGerman Bvunzo Mibvunzo neMhinduro mune .zip yekuchengetedza.
Jerman YDS mibvunzo kunze 2006
YDS Mibvunzo yeGerman uye mhinduro dziri mune imwe faira.
Iwe unogona kuwana rubatsiro runodikanwa rweGerman YDS uye mamwe emisheni kubva kuvadzidzisi vedu pane almanx maforamu.
Memaforamu edu munogonawo kuwana mazano anodiwa kuti mugadzirire kuGermany mhuri yekuongorora zvakare, YDS, Uds, Yds, A1, A2, B1, B2.
Iyo almancax timu inokushuvira iwe kubudirira mune bvunzo dzako dzese ...
erdal anodaro 5 zuva rapfuura
hiçbir yerde bulamadım burada buldum ya çok sağolun